ဟာသများ | ဥက္ကာကိုကို
ကျနော်ဆယ်တန်းအောင်ခါစတုန်းက သံတွဲမြို့မှာ ဆယ်တန်းလာတက်နေတဲ့ ကျနော်တို့အခေါ် ပုရစ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ တွဲမိတယ်။ အခုတော့သူလည်း ရန်ကုန်မှာ စူးရှဆိုတာဘာဆိုလား နာမည်တစ်ခုနဲ့ သတင်းထောက်လုပ်စားနေရဲ့။
သံတွဲမှာ အတွဲမိမိ သောင်းကျန်းရင်း တစ်နေ့ကျတော့ ငပလီမှာ ရေသွားကူးရာကနေ ကမ်းခြေမှာ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဘော်ဒါသွားဖြစ်ပြန်ရော။ သူကလည်း ဂျာမဏီနိုင်ငံသားထင်ရဲ့။ (သိပ်တော့မမှတ်မိ)။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ဘွတ်ရွှတ် ဘုချွတ်။ ကျနော်တို့ကလည်း အင်္ဂလိပ်စာကို ဖိုသီဖတ်သီ။ တစ်လုံးပြောလိုက်။ လက်ကလေးခြေကလေးလှုပ်ပြလိုက်နဲ့ တော်တော်ရင်းနှီးသွားကြတယ်။
နောက်နေ့ထပ်ချိန်းပြီး သံတွဲမြို့ပေါ်ကိုလိုက်ပြဖို့ သူကတောင်းဆိုတယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ကောင်လည်း နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ တွဲနေကြတယ်ပေါ့လေ။ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွနဲ့ လူရှေ့သူရှေ့မှာ ဂျာမန်ကြီးကိုခေါ်ပြီး ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ပေါ့။ ကျနော်တို့မြို့မှာက လည်ပတ်စရာဆိုလို့ ဘုရားတောင်သုံးတောင်ပဲရှိတယ်။
အံတော်၊ နံတော်၊ ဆံတော်ဆိုပြီး စေတီသုံးဆူရှိတယ်။ စက်ဘီးတစ်ယောက်တစ်စီးနဲ့ ဂျာမန်ကြီးကို ဟိုလိုက်ပြ ဒီလိုက်ပြ။ သူ့မှာပါလာတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာလေးကို သဘောတကျကျနဲ့။ (အဲ့ဒီတုန်းက ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးတာ)။
နောက်ဆုံးဘုရားတောင်လည်းရောက်ရော ကျနော်က မတက်နိုင်တော့ဘူး။ မောနေပြီ။ ဂျာမန်ကြီးနဲ့ ပုရစ်က ကျနော့်ကိုစောင့်ခေါ်တယ်။ ကျနော်ကလည်း မောမောနဲ့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။ ဒီတောင်ကအရမ်းမြင့်တယ်။ ငါမတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ ပြောချင်တာ။
လူကလျှာလည်းထွက်နေပြီ။ ရှေ့ကတောင်ကုန်းကို လက်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ ဂျာမန်ကြီးက ကျနော်လက်ညိုးထိုးရာလိုက်ကြည့်တယ်။ ကျနော်လည်း ပါးစပ်ထဲတွေ့တာကောက်ပြောချလိုက်တယ်။
““ငှင်… ”” (ကျနော့်အင်္ဂလိပ်စာကို ပုရစ်လက်ဖျားခါသွားသံ)
““မတ်စောက်”” (ဂျာမန်ကြီး ရေရွတ်သံ)
ကျနော်ကလည်း လျှာလေးတန်းလန်း တန်းလန်းနဲ့ ခပ်တည်တည်ဘဲ။
““ရက်စ်… မတ်စောက်…ဗဲရီး မတ်စောက်””
ပုရစ်က ဖိုးလိုးဖတ်လပ်ကလေး တခွိခွိရယ်တယ်။ သူရယ်တာမြင်တော့ ဂျာမန်ကြီးလည်း ဘုမသိဘမသိ တဂိဂိနဲ့ရယ်တယ်။ ကျနော်ကလည်း ခပ်တည်တည် တဟစ်ဟစ်နဲ့ လိုက်ရယ်ပေးရတယ်။
အဲ့ဒီနေ့လည်က ဘုရားတောင်ပေါ်က ပြန်ဆင်းလာကတည်းက ငပလီကို စက်ဘီးနဲ့ ပြန်သွားတဲ့အထိ ဂျာမန်ကြီးတစ်ယောက် သူ့ဘာသာ ဘာတွေအတွေးပေါက်တယ်မသိ။
““ မတ်စောက်… မတ်စောက်… ဗဲရီးမတ်စောက်… မတ်… စောက်”” နဲ့။ ငိငိ။
ဒို့ဘော်ဒါကြီးများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ (၂)
ကွပ်ကဲရေးရုံးအတွင်းဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်အမတ် အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီးတစ်ယောက် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်လျှက်ရှိသည်။ စဉ်းစားခန်းဝင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၀ိတ်ကျစေရန်အတွက်ဟု ဆိုသည်။ (စကားချပ်။ မယုံလျှင် ပုံပြင်မှတ်) ကွပ်ကဲရေးရုံး အတွင်း ထောင့်တစ်ထောင့်တွင် လွှတ်တော်အမတ် အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ ဦးစည်သူမှာ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းကာ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးထံမှ လက်သိပ်ထိုးဝယ်ယူထားသော ဆေးခြောက်ပါဝင်သည့် ဆေးပေါ့လိပ်ကို ဖွာရှိုက်ရင်း
စည်းစိမ်ခံစားလျှက်ရှိသည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ လွှတ်တော်အတွင်း မေးခွန်းတင်သွင်းရာမှ ကျရာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပါမည့်အကြောင်း ဆတ်ဆော့၍ ထည့်သွင်းပြောကြားမိရာမှ ယခုကဲ့သို့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာသို့ အကြံပေးအနေဖြင့် စေလွှတ်ခံရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
““ဗိုလ်မှူးကြီး စစ်ကိုနိုင်အား………. လ…. ဗြု”” (အလေးပြုဟူသည့်အသံကို အလေးကိုခပ်မြန်မြန်ဆွဲ၍ ပြု ကို ဆောင့်ချရသောကြောင့် လဗြု ဟု ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်)
အထက်လွှတ်တော် အောက်လွှတ်တော်တို့မှ တညီတညွှတ်တည်း အချွန်ဖြင့်မလိုက်သောကြောင့် အသစ်စက်စက် အရှင်မွေး၍နေ့ချင်းကြီးကာ ကွပ်ကဲရေးမှူးကြီးဖြစ်လာသည့် ဗိုလ်မှူးကြီး စစ်ကိုနိုင် ရုံးအတွင်း ဆောင့်ကြွားကြွားဝင်ရောက်လာသဖြင့် အရာရှိအရာခံများ သတိဆွဲအလေးပြုလိုက်ကြသည်။
ရုံးခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်းပင် R.T (Radio Telephony) ဆက်သွယ်ရေးစက်ကိုကောက်ကိုင် ကာ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာသို့ရောက် ရှိနေသော ဗျုဟာမှူးကြီး အဘမင်းထက်စံရှိရာသို့ ဆက်သွယ်လိုက်သည်။ စစ်ကိုနိုင်နှင့် အဘမင်းထက်စံတို့ အပြန်အလှန်
ပြောစကားများကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ Continue Reading
““ဟင်… ဒါဆို သူနဲ့မကစားနဲ့တော့”” Continue Reading